MPAKA AN-KERINY NAIDITRA AM-PONJA
Efa diso tafahoatra ny fahasahian’ireo mpitatitra taksibe maniratsira mpanjifa.
Nolavin’ny filankevi-panjakana ny fampiatoana ny sazin’ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara malagasy, Faniry Ernaivo.
Mpizahatany sinoa 50 000 no ho avy aty Madagasikara amin'ny 2019 raha ny fampanantenana nomen'ny governemanta sinoa amin'ny minisitry ny fizahantany malagasy.
MIASA NY ZANDARY
Nampiana isa ireo zandary izay mitady ireo mpaka an-keriny ilay zazavavikely karàna teny amin’ny RN4.
Andrasana anio ny fahatongana voalohan’ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara mila ravinahitra any ampitan-dranomasina hiatrika ny fihaonana amin’i Soudan etsy Vontovorona ny alahady izao.
Roa lahy no naiditra am-ponja eny Antanimora noho ny fanahiana ho fanatontosana fakana an-keriny karàna teny Ampasampito ny 24 mey lasa teo.
Nahatrarana basy sy fitaovam-piadiana hafa teny amin’izy ireo nandritry ny fisamborana izay nataon’ny cellule mixte anti-kidnapping iraisan’ny vondrona telo an’ny mpitandro ny filaminana. Telo no voasambotra saingy nahazo fahafahana vonjimaika ny iray. Olona maherin’ny 100 no efa nalaina am-bavany saingy tsy mety tonga any amin’ny tena atidoha nikotrika mihitsy ny fisamborana.
Miaro tena mafy i Maurice Tsihavonana taorian’ny fitorian’ny fianakavian’i Maurice Rakotomalala izay maty novonoina tao an-tranony. Nihaona tamin’ny mpanao gazety izy omaly ary nanao izay faran’ny azony natao mba hanadiovana ny tenany manoloana izay nolazainy fa fanalam-baràka nataon’ny havan’ny maty. Sarotra inoana anefa ny zava-nitranga toy ny hoe nisy zandary sy sivily mpiambina ny trano kanefa tafiditry ny mpamono olona. Efa nohainoina teny amin’ny zandary izy ny zoma lasa teo.
Namoaka fanambarana manameloka ny fanendrena ny minisitry ny serasera vaovao Riana Andriamandavy VII omaly ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety Gerard Rakotonirina. Fanaovana tsinontsinona ny mpanao gazety io fanendrena tefy maika io , hoy izy satria tsy mba nakan-kevitra akory izy ireo fa tonga dia novesarina “hazo tsy fantatra” fotsiny.Ny famahana ny olan’ny samy mpanao politika fotsiny no nojerena fa nodinganina ny lafiny teknika. Miantso ny mpanao gazety rehetra hanatrika ny famindram-pahefana anio eny Nanisana ary haneho ny tsy fankasitrahana ity minisitra vaovao ity ny filohan’ny OJM.
Hihaona amin’ny governemanta ny CENI mba hahafahana manapaka ny datim-pifidianana amin’izay. Hatreto dia mitazona ny 17 oktobra ny CENI, daty izay hitan’izy ireo fa tena mety ara-teknika amin’ny fanatontosana ny fifidianana. Raha ny lojika anefa dia tsy maintsy hanao izay hitarihana ny fotoana ny governemanta vaovao izay mbola handrapaka aloha satria vao tonga. Ahiana ho mbola lavitra, araka izany ny fididianana ho filoham-pirenena.
Nosamborina tao Mangarano-Toamasina ny mpangalatra omby vavy mitondra vohoka. Teo no nahafantarana fa alain’izy ireo ny omby mbola ao an-kibo ary hataony sorona mba entina hanamasinana ny ody gasy. Vehivavy no tompon’antoka amin’ilay asa famosaviana ary ireo lehilahy kosa mitady ilay hery ratsy avy amin’ny asa tanany. Efa norasaina ny kibon’ilay omby ary teo no nahitana fa ny mason’ilay omby kely no tena nalan’izy ireo mba hampiasaina amin’ny masobetsimahita.
MAORISIANA MPANAO TRAFIKANA RONGONY
Mifandona ny firenena Malagasy sy ny Maorisiana manoloana ny fahatrarana ireo Maorisiana telo izay nanao trafikan-drongony mahery vaika saika haondrana any La Réunion sy Maurice. Nandritry ny fanolorana ny fampanoavana omaly dia nisy manam-pahefana maorisiana tonga tao amin’ny fitsarana ary nangataka ny hampodiana avy hatrany ny mpiray tanindrazana aminy any Maorisy ka any no hitsaràna azy. Tsy nanaiky anefa ny fitsarana malagasy hatreto. Raisin’ny olona ho tena firenena tsinontsinona mihitsy ny nosintsika.